Resaky ny mpitsimpona akotry : tsy fiankinana amina fivavahana sy fitondrana tsy mivavaka | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : tsy fiankinana amina fivavahana sy fitondrana tsy mivavaka
Ny fanambarana ao amin’ny Lalàmpanorenana ny maha fanjakana tsy miankina amina fivavahana tsy mandrara ny mpitondra hanana na hanaja ny finoany, maro amin’ireo tompon’andraikitra ambony nifandimby teo amin’ny fitondrana ny tany sy ny fanjakana no kristianina. Tsy nisy no niseho amin’ny maha olona tsy mivavaka azy. Ny toetra anefa matetika dia tsy mitaratra ny maha olona voton’anatra araky ny fampianaran’ny finoan’izy ireo.
Herinandro masina no diavina izao, anio dia Alakamisy masina. Fanetren-tenan’ny mpitondra na ny mpitarika no hevitra nasondrotr’I Jeso tamin’ny fandohalihany teo am-panasana ny tongotr’ireo mpanara-dia azy. Tsy hay ho ampiharina ara-bakiteny izany, sady fandinganana ny “laïcité” ny fanaovana izany fihetsiketsehana izany no mety ho fanararaotana hanefana fihatsarambelatsihy fotsiny. Eo amin’ny ezaka andavanandro no azo ahitana ny fanetren-tenan’ny mpitondra, tsy mila manasa ny tongotry ny vahoaka sao kosa anefa manasa tanana fotsiny eo anoloan’ ny fahasahiranan’ny mponina. Mahatsiaro tena ho tsy manana mpiahy anie rehefa latsaka ankaterena, noho izany matetika ny vahoaka dia mihevitra fa mijery ny fahoriana mandifitra toy ny fitazanana tany vaky ireo tompo’andraikitra ambony isan-tsokajiny.
Na tsy miankina amina fivavahana aza anefa ny fanjakana, dia tsy hain’izay mandray fitenenana no tsy hanomboka ny kabariny amin’ny fiantsoana ny anaran’Andriamanitra amina fisaorana sy fanomezam-boninahitra azy. Tsy misy maha ratsy izany raha toa tsy tia ho deraina amina maha kristianina ny tena no antony anaovana izany. Henjankenjana anie ny anatra mifono ao anatin’ity Paska ity, sao ny tena tsy mijery ny fahafoizan-tena amina fijaliana ka hanantena fotsiny ny maha fetibe io Alahady io.
Noho ny tonon’andro moa dia mifanandrify mifanaraka amin’ny andro fahatsiarovana ny 47 ny Paska amin’ity taoana 2016 ity. Samy manandratra ny hevitra filàna fahafoizan-tena na ny Paska na ny faha-29 Marsa. Tsy ampitaha ny tsy tokony ampitoviana sanatria, nefa kosa ireo andro roa ireo dia samy mampahatsiahy ny fahasahiana fanaovana sorona ny tenany raha ilaina izany. Tsy mitaky izany ny fitantanana ny raharaha, mba ho lava andro eo amin’ny fitondrana anie izay tsy manompo afa-tsy ny harena no tsy manana fanantenana afa-tsy ny voninahitra fotsiny.